Videos - Garsoor.net - Garsoor is the most trusted online media in Somalia
Daawo: Ciidamada isku dhafka ah ee loo sameeyay magaalada Gaalkacyo
Ciidamo isku dhaf ah oo loo diyaariyay sugida ammaanka magaalada Gaalkacyo ayaa dhawaan tababar looga furay xarunta gobolka Mudug kadib markii ay arintasi ku heshiiyen masuuliyiinta maamulada Puntland iyo Galmudug. Munaasabad lagu faahfaahinayay ciidamadan isku dhafka ah oo ay ka qeybgalen madaxweyne ku xigeenka Galmudug,Maxamed Xaashi Cabdi ” Carabeey” iyo...
Daawo: Safaarada Turkiga oo shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeysay munaasabada 1-da Luulyo
We congratulate the Independence Day of the Somali people. pic.twitter.com/0YEsIfdQxQ — Turkey in Somalia (@TC_Mogadishu) July 1, 2017 ...
Daawo: Saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka Puntland oo u hanjabay madaxweynaha Khaatumo Cali` Khaliif Galaydh
Daawo: Ra’iisul wasaare Khayre oo xalay la kulmay xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo maamulka gobolka Banaadir kadib weerarkii degmada Wadajir
Ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa xalay kulan deg deg ah la qaatay hey’adda ammaanka,wasiirka caafimaadka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir,waxaana dhamaan xubnahasi ay sharaxad ka bixiyen qaabkii uu u dhacay weerarkii degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Weerarkii shalay oo uu fuliyay qof waday gaari caasi ah oo qudaar lagu soo raray ayaa beegsaday xarunta...
DAAWO: Qarax ismiidaamin ah oo ku dhawaad 20 ku dilay magaalada Muqdisho iyo Al Shabab oo sheegatay masuuliyada weerarkasi
Daawo: Dowlada Imaaradka oo wiil Soomaaliyeed ka soo musaafurisay Dubay,waa maxay sababta?
Daawo: Diyaarada Turkish airline oo maalintii seddexaad ku degi weysay garoonka Muqdisho
Diyaarada Turkish airlines ayaa maalintii seddexaad shalay ku fashilantay iney soo caga dhigato garoonka Aden Cadde ee magaalada Muqdisho sababo la xiriira cimilada oo aad u xun. Rakaabkii saarnaa diyaarada oo shalay dib loogu celiyay magaalada Mombasa waxay qaarkod kamid ahayen dadkii beryahan diyaarada saarnaa si ay Muqdisho u yimadan. Mid kamid ah rakaabka oo lagu magacaabo...
Daawo: Ninkii isku qarxiyay agagaarka dekeda Muqdisho
Toos: Daawo shirka Sacuudiga ee looga hadlayo xagjirnimada iyo argagixisada
Magaalada Riyadh ee dalka Sacuudiga waxa imminka ka socda shirka looga hadlayo arrimaha Xagjirnimada iyo argagixisada. Halkan hoose toos uga daawo;- https://livestream.com/accounts/11893563/events/7414865 https://livestream.com/accounts/11893563/events/7414865 ...
Daawo: Sida ugu Fudud ee lagu Jaro Baruurta ku samaysanta Caloosha ee loo yaqaan Xaluska ama #Bellyfat-ka
Somalia,(Garsoor)- Hoos ka daawo ilaa dhowr Jimicsi oo muhiim u ah jirka Qofka Bini’adamka ,kuwaasi oo ka hortagaya in uu si sahlan kugu fuulo culays. Tababarada ayaa sidoo kale kaa caawinaya in aadan yeelan Calool ama Bellyfat, kaasi oo dhibaato ba’an ku haya kala bar dadka ku nool dunidan. Fadlan Hadii aad ka hesho muuqalkan ha ilaawin in aad rukumato mowduucyo...